Feiyu WG2, वाटरप्रूफ खेल क्यामेराको लागि एक स्टेबलाइजर ग्याजेट समाचार
एशियाई कम्पनी FeiyuTech शुरू भएको छ एक स्टेबलाइजर - वा जिमबल - खेल क्यामराहरूको लागि। यसले हामीले रेकर्ड गरेको छविहरू बनाउनेछ जब हामी चरम खेल अभ्यास गर्दछौं वा जब यो वर्षा हुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ र कम आन्दोलन वा कम्पनको साथ।
अधिक र अधिक उपयोगकर्ता चरम खेल अभ्यास गर्दा उनीहरूका सबै उपलब्धिहरूको सम्झनाहरू प्राप्त गर्न चाहन्छन्। यो गर्नको लागि उत्तम तरिका भनेको मोबाइल फोन प्रयोग गर्नु होईन, तर खेलकुद क्यामेरा हो। त्यहाँ बजारमा धेरै ब्रान्डहरू छन्, तर शायद सबैभन्दा लोकप्रिय GoPro हो। यी र अरुको लागि Xiaomi क्यामेरा जस्तै, FeiyuTech कम्पनीले पानीको प्रतिरोध गर्न सक्ने एक gimbal शुरू गरेको छ। उहाँको नाम हो Feiyu WG2.
यो जिम्बल हल्का वजन (300 ग्राम भन्दा कम) र हो यसको स्वायत्तता २. hours घण्टा हो। साथै, Feiyu WG2 एक जिमबल हो जुन कुनै पनि परिस्थितिमा अनुकूल हुन विभिन्न आरोहणहरूको साथ आउँदछ। यो जस्तो अभ्याससँग मिल्दो छ दौड, साइकल, स्विमिंग, मोटरसाइक्लि,, मोटर रेसि water पानी सहित खेल। तपाईंले सँधै मनमा राख्नु पर्छ कि तपाईं पुग्न सक्नुहुने अधिकतम गहराई ०. 0,5 मीटर छ। निस्सन्देह, पानी वा माटोको स्प्लेशहरू यस स्टेबलाइजरलाई खेल क्यामराको लागि समस्या हुनेछैन।
El Feiyu WG2 स्टीयरिंग व्हील, साइकल ह्यान्डलबार, हेलमेट, ट्राइपड, सेल्फी स्टिक वा दोहोरिने गरी जोड्न सकिन्छ। छातीमा लगाउन त्यस्तै, FeiyuTech ले एक मोबाइल अनुप्रयोग प्रदान गर्दछ जुन जिमबल र स्मार्टफोनलाई ब्लुटुथ टेक्नोलोजी मार्फत रेकर्डिंग वा तस्बिरहरू नियन्त्रण गर्न जडान गर्दछ। यो धेरै रोचक हुनेछ जब प्रयोगकर्ता रेकर्ड गर्न चाहन्छ बितेको समय degrees 360० डिग्रीमा
Feiyu WG2 अब खरीदको लागि उपलब्ध छ र तपाइँ यसलाई यसको अनलाइन स्टोर वा मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ अमेजन मार्फत। हो, यसको मूल्य सस्तो छैन: 299 यूरो.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » ग्याजेटहरू » Accesorios » Feiyu WG2, वाटरप्रूफ खेल क्यामेराको लागि एक स्टेबलाइजर